Wax-soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha daryeelka-caafimaad-la'aanta Shiinaha iyo - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Calool-celinta iyo Daryeelka Caafimaadka
Celcelis la'aanta iyo daryeelka caafimaadku waa cilmi la dabaqay, oo loo qaybiyay kalkaalisada guriga iyo kalkaalisada lacag bixinta. Kalkaalisada waa in lagu bixiyaa si waafaqsan wasaaradda caafimaadka, qaranka WeiJianWei, waaxda maamulka caafimaadka hoos qodobada la xiriira ee sharciyada iyo xeerarka si ay u fuliyaan barnaamijka kalkaalinta u dhiganta, habaysan iyo ujeedo, la qorsheeyay si ay u dhamaystiraan aasaaska ama daryeelka kalkaalinta caadiga ah, fiirsashada. si loo fahmo saldhigga miisaanka jidhka bukaanka, sida ku cad xogta, ama la helo isbeddellada xaaladda kormeerka cudurrada si ay u dhigmaan dhakhtarka dhamaystiray daaweynta bukaanka, Xoojinta kormeerka faleebada iyo waxbarashada, daaweynta waqtigeeda ee khilaafaadka caafimaadka, si looga hortago dhacdooyinka shilalka caafimaadka. Calaamadaha muhiimka ah ee bukaannada halista ah waa lala socdaa, muunadaha waa la ururiyaa, miisaanka iyo nafaqeynta ayaa la ururiyaa oo si joogto ah loo falanqeeyaa, nolol maalmeedka bukaanka, hawl maalmeedka, daawada iyo badbaadada ayaa laga taxadaraa dhinacyada jir ahaaneed, nafsiyeed, bulsho, dhaqan iyo ruuxeed. Haddii bukaanka wadna xanuunka myocardial la tusi karo: physiological - xanuun, laabta oo wareersan, neefta oo gaaban; Cilmi-nafsiga - cabsi, cabsi; Fikirka iyo dhaqanka - heerka is-aqoonsiga iyo fahamka aqoonta cudurka; Ruuxa - waxaa qiimeeya oo ixtiraama kalkaaliyayaasha iyo dhakhaatiirta.
Sababtoo ah daaweynta cudurka nafsaaniga ah iyo natiijada iyo arrimaha nafsaaniga ah ayaa aad isugu dhow, xaaladda shucuureed ee bukaanka iyo isbeddellada nafsaaniga ah waxay si toos ah u saameeyaan saameynta daaweynta cudurka iyo shahaadada baxnaaninta, sidaas darteed, cudurka nafsaaniga ah ee kalkaalinta nafsaaniga ah ayaa si gaar ah muhiim u ah. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ceshad la'aanta iyo daryeelka caafimaadku waa:
1. Ka fududee bukaanada cudurka kacsanaanta, walaaca, niyad jabka, niyad-jabka iyo dareenka kale, kor u qaad kalsoonida si looga gudbo cudurka.
2. Waxbarashada saxda ah iyo waqtiga saxda ah ee caafimaadka waxay ka caawisaa bukaanada inay la qabsadaan door cusub iyo jawi bukaan-jiif sida ugu dhakhsaha badan.
3. Ka caawi bukaanada inay dhistaan ​​xidhiidh cusub oo dadka dhexdooda ah, gaar ahaan xidhiidhada dhakhtarka iyo bukaanka, si ay ula qabsadaan deegaanka cusub ee bulshada.
Marka uu qofku bukooto, doorkiisa ama keeda bulshada ayaa isbedela. Natiijada doorka lama filaanka ah ee bukaanka iyo sidoo kale isbeddelka deegaanka nolosha, xiriirka dadka dhexdooda, bukaanku inta badan way adagtahay in uu la qabsado si lama filaan ah, waxaa jiri doona qaar ka mid ah dhibaatooyinka nafsiga ah, kuwaas oo u baahan kalkaalis nafsi ah, si ay u caawiyaan bukaanka in la abuuro xaalada nafsiga ah ee ugu wanaagsan ee ku haboon daaweynta iyo baxnaaninta. Kalkaalinta cilmi-nafsiga ma aha oo kaliya mid ku habboon baxnaaninta bukaanka, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo hirgelinta kalkaalinta guud ee bukaanka, hagaajinta saameynta kalkaalinta. Sidoo kale faa'iido leh si loo hagaajiyo saameynta daaweynta bukaan-socodka, si bukaan-socodka uu dhaqso u soo kabsado.
Bacda Uruurinta Kaadi Silicone ee Waayeelka
Bacda Uruurinta Kaadi Silicone ee Waayeelka: Kaadida waxay ku xidhan tahay bacda kaadida ee ka samaysan caag, tuubada caaga ah, bacaha tuubada cinjirka, U isticmaal walxaha dabacsan: kaadi-ceshad la'aanta, istaroogga, hemiplegia. Naafada, baxnaaninta qalliinka ka dib, ambalaayada ama kuwa ku tiirsan iyo kooxaha kale ayaa isticmaala NoocaStyle: moodooyinka lab iyo dhedig
Bacda Kaadi Ururinta Silikoon ee Haweenka
Bacda Kaadi-ururinta Silikoonka ee Haweenka: Kaadida waxay ku xidhan tahay bacda kaadida ee ka samaysan caag, tuubada caaga ah, bacaha tuubada cinjirka, U isticmaal walxaha dabacsan: kaadi-ceshad la'aanta, istaroogga, hemiplegia. Naafada, baxnaaninta qalliinka ka dib, ambalaayada ama kuwa ku tiirsan iyo kooxaha kale ayaa isticmaala NoocaStyle: moodooyinka lab iyo dhedig
Shandad Kaadi Kaadi Lab Oo Dib Loo Isticmaali Karo
Shandad Kaadi Lab Oo Dib Loo Isticmaali Karo: Kaadidu waxay ku xidhan tahay bacda kaadida ee ka samaysan caag, tuubada caaga ah, bacaha tuubada cinjirka, U isticmaal walxaha dabacsan: kaadi-ceshad la'aanta, istaroogga, hemiplegia. Naafada, baxnaaninta qalliinka ka dib, ambalaayada ama kuwa ku tiirsan iyo kooxaha kale ayaa isticmaala NoocaStyle: moodooyinka lab iyo dhedig
Bacda Kaadi Ururiyaha Silikoon Caafimaad
Bacda Caadiga ah ee Silikoonka Caadiga ah: Kaadida waxay ku xidhan tahay bacda kaadida ee ka samaysan caag, tuubada caaga ah, bacaha kateetarka cinjirka, Isticmaal walxaha dabacsan: kaadi-ceshad la'aanta, istaroogga, hemiplegia. Naafada, baxnaaninta qalliinka ka dib, ambalaayada ama kuwa ku tiirsan iyo kooxaha kale ayaa isticmaala NoocaStyle: moodooyinka lab iyo dhedig
Bacda Kaadi Ururinta Silikoon Caafimaad ee Ragga
Bacda Caadiga ah ee Silikoon-ururinta ee Ragga: Kaadida waxay ku xidhan tahay bacda kaadida ee ka samaysan caag, tuubbada caaga ah, bacaha tuubada cinjirka, U isticmaal walxaha dabacsan: kaadi-ceshad la'aanta, istaroogga, hemiplegia. Naafada, baxnaaninta qalliinka ka dib, ambalaayada ama kuwa ku tiirsan iyo kooxaha kale ayaa isticmaala NoocaStyle: moodooyinka lab iyo dhedig
Bacda Kaadi Ururiyaha Silikoon
Shandad Ururinta Kaadida Silikoon: Marka loo eego sifooyinka jidheed ee bukaanka lab iyo dheddig, waxa jira afar nooc oo kaadi-bixiyeyaal ah, kuwaas oo kala ah kaadi-bixiyeyaal bac ah oo la tuuri karo oo ragga ah, kaadi-bacaha silica gel-ka-xiran ee haweenka iyo cadaadiska taban ee degdegga ah ee sariirta. Dhammaan noocyada kala duwan ee hydrocephalus, dhaawaca craniocerebral daran, hernia cerebral ka dib miyir-beelka, bukaannada daaqsinka, hemiparalysis, waqtiyo kala duwan oo ka soo kabashada maskaxda ee daran, qoynta sariirta muddada dheer, kaadida kaadida, jabka, sonkorowga insipidus, caabuqa hore ee kaadi mareenka oo leh calaamado aan caadi ahayn. maskaxda iyo neerfaha loo isticmaalo maalin kasta iyo sariirta.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Calool-celinta iyo Daryeelka Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Calool-celinta iyo Daryeelka Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Calool-celinta iyo Daryeelka Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.